Ireo mpivarotra fironana amin'ny fialantsasatra dia tsy afa-manoatra | Martech Zone
Zoma 30 Novambra 2012 Talata, Desambra 4, 2012 Douglas Karr
Ny vanim-potoana fialantsasatra dia vanim-potoana mahatalanjona satria, raha ny hevitro, saika ny resaka fifanarahana sy fampiroboroboana rehetra. Hita fa ny sisa amin'ny taona, ny mpanjifa dia miahiahy ny kalitaon'ny mpivarotra, ny fifandraisana, ny politika miverina ary ny fandefasana… saingy toa mivoaka eo am-baravarankely izy rehetra mandritra ny fialantsasatra. Ny MDG Advertising dia nametraka an'ity infographic amin'ny fironana sasany izay mino izy ireo fa tsy azo tsinontsinoavina ny mpivarotra.
Isan-taona, ny fialantsasatra dia mamoaka ny mpanjifa mitady fanomezana lehibe sy fifanarahana tsara. Fotoana fohy talohan'ny nidiran'ny be sy ny maro ny toeram-pivarotana dia nibanjina ny mason'ny mpivarotra ny mahita ny fironana amin'ny fivarotana amin'ny vanim-potoana izay hamaritana ny làlan'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra fialantsasatra. Mba hanolorana fanomezana ho an'ireto mpivarotra ireto, MDG Advertising dia namorona sary fampiasa manaraka. Mampiseho ny fomba hitondran'ny dizitaly ny fomba fiantsenana sy fandaniana ataon'ny Amerikanina amin'ity vanim-potoana ity.
Ny alaiko… tsara kokoa ny fifanarahana arahin'entana ary ho vonona kokoa hivarotra ny heck amin'izy ireo ianao. Manantena aho fa hanampy entana hafa ao anaty harona fiantsenana ny olon-drehetra mba hiverina amin'ny mainty!
Tags: fironana fialantsasatradokam-barotra mdg